Amiirka Al Shabaab Abu Zubeyr “Dagaalkeenu xuduud uma go’na” Dhageyso. |
Amiirka Al Shabaab Abu Zubeyr “Dagaalkeenu xuduud uma go’na” Dhageyso.
Amiir Al shabaab Shiikh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Zubeyr oo kalmad cusub soo diray ayaa waxa uu kaga hadlay Arimaha Dagaalka Somaliya kuna hanjabay in meel walbo ay baahdaan inay weeraran aysan kajoogsan doonin.
“Waxaan halkaan dardaaran ugu soo gudbinayaa Mujaahidiinta thuquurta, dardaarankaasi 2 waa arrin aan looga maarmin in Jihaadku uu maqbuul noqdo, 3-na waa tiirar aan looga maarmin isku duubmida safka Mujaahidiinta, 3-na waxey inoogu kaalmeynayaan dagaalka aan kula jirno cadowgeena, 3-na waa sifaat iyo tilmaano ay tahay qofka Mujaahidka ah inuu ku tilmaanaado dagaalka lagula jiro Saliibiyiinta” sidaasi waxaa yiri Sheekh Mukhtaar Abu Zubeyr.
Waxaa uu adkeeyay dhamaan ciidamada Mujaahidiinta in ay ogaadaan Jihaadka maanta soconaya in ugu danbeyn guushiisa ay Muslimiintu leeyihiin, isla markaana laga adkaanayo cadowga ku soo duulay dalka, sidaa darteed waxaa uu tilmaamay dagaalkoodu inaanu xuduud iyo qaab u go’neyn, balse ay siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan kula dagaallamayaan cadowga.
“Waxaa loo baahan yahay qofka Mujaahidka ah inuu ogaado dagaalka maanta aan gaalada kula jirnaa inuu yahay dagaal aan xuduud laheyn, oo bad iyo birri-ba ah, cir iyo dhul ah, wadan gaar ah, wadan gaar ah aan ku ekeyn, asaaliibtiisuna aaney ku ekeyn usluub ama hab gaar ah, balse ay tahay hab waliba oo ay ku imaan karto”.
Isagoo tix gabay ah ku cabiraya ayuu Amiirka Mujaahidiinta Soomaaliya wuxu dhanka kale sheegay guusha iyo Nasriga la sugayo iney ka horeeyaan imtixaano iyo kala sooc dadka ah, taas oo ah Sunnada ALLAH ayna tahay in Mujaahidiintu ay adkeysi iyo thabaat kaga gudbaan.
Amiirka XSHM wuxuu kula dardaarmay ciidamada Mujaahidiinta iney aad u horimariyaan xeeladaha iyo taaktiigga dagaalka, sidoo kalena ay xoojiyaan dhul yaqaanimada maadaama cadowga hadda lagula dagaallamayo dhul keymo ah oo aaney ku dhaq dhaqaaqi Karin.
Halkan ku dhufo si aad u dhageysatid hadalka Amiirka al shabaab